May 10, 2021 - Achawlaymyar
May 10, 2021 by Achawlaymyar
ဒီည ဒီစာကို မဖြစ်မနေ ဖတ် လိုက်ပါ မင်းဘဝအတွက် အရမ်းကောင်းလွန်းလို့ပါ ကောင်းလိုက်တဲ့စကား သင့် ပိုက်ဆံအိတ်ထဲမှာ ငွေ ရှစ်သောင်းခြောက်ထောင့်လေးရာ(၈၆, ၄၀၀) ရှိတယ်။ လူတစ်ယောက်ကသင့်ဆီက ၁၀၀တန်တရွက် ခိုးသွားတယ်။ဒါဆိုရင် သင် စိတ်ဆိုးမာန်ဆိုးနဲ့အဲဒီလူကို လိုက်ရှာဖမ်းဖို့အတွက်သင့်ကျန်တဲ့ပိုက်ဆံ (၈၆, ၃၀၀)လုံးကို ပုံပြီးသုံးမလား။ ဒါမှမဟုတ်မေ့မေ့ပျောက်ပျောက်နေမလား။အဖြေ ကတော့ ရှင်းပါတယ်။စိတ်ပြေ လက်ပျောက်ပဲ နေမှာပေါ့။၁၀၀လောက်လျော့သွားတာ အတွက်ဘာကြောင့် မအိပ်နိုင်မစားနိုင်ဖြစ်နေမလဲ။ ဟုတ်ပြီ၊ ဒါဆို သင်တို့ ကျွနု်ပ်တို့ရဲ့တနေ့တာမှာစက္ကန့်ပေါင်း ၈၆, ၄၀၀ ရှိတယ်။ အဲဒီထဲက တစုံတယောက်ကြောင့်စိတ် အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ရတဲ့အချိန် တစ်မိနစ်ကျော်ကျော်(စက္ကန့် ၁၀၀လောက်) အတွက်နဲ့ဘာကြောင့်များစိတ်ဆိုးဒေါသတွေ ထွက်ပြီးကျန်တဲ့ တနေ့တာရဲ့လက်ကျန်၈၆, ၃၀၀စက္ကန့် လုံးလုံးကိုအဆင်မပြေဖြစ်အောင် လုပ်မလဲ။ဘဝဟာ ကျယ်ပြန့်ပါတယ်။အသေးအမွှားကိစ္စလေးတွေကြောင့်အနှောင့်အယှက် အဖြစ်မခံပါနဲ့ Crd Practical Dreams ဒီည ဒီစာကို … Read more
ရွာဓလေ့အပျိုစင်လေးတစ်ယောက် လင်ကောင်မပေါ်ပဲဗိုက်ထွက်လို့ ဆေးနည်းပေးလိုက်သောအခါ
ရွာဓလေ့အပျိုစင်လေးတစ်ယောက်လင်ကောင်မပေါ်ပဲဗိုက်ထွက်လို့ ဆေးနည်းပေးလိုက်သောအခါ. ဆေးကုသိုလ် ရှယ်ပေးပါ.မိမိ ပတ်ဝန်းကျင်သိရအောင် ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် ကြုံခဲ့ရတဲ့သင်္ဘောရွက်အစွမ်း ကျွန်တော် အိမ်ဘေးက ၂၂နှစ်အရွယ် ကလေးမလေးရောဂါစဖြစ်ပါတယ်။သူတို့စဖြစ်တဲ့ ရောဂါဟာ ဗိုက်မှာ ဘာရယ်မသိတဲ့ အလုံးလေးစတည်လာပါတယ်။ အဲ့မှာ တောဓလေ့ မြန်မာပီပီအချို့က ဗိုက်ကြီးတယ်ပြောလို့ပြော လင်ပြောရမှာရှက်တာနေမှာဆိုလိုဆိုနဲ့မိဘတွေကလဲရိုးချက်သားသမီးကိုမယုံပဲ သူများပြောစကားနဲ့ ကလေးမလေးကို စတင်ပြီး မကြည်ပါတော့တယ်။ ကလေးမလေးမှာ ရောဂါထက် ပတ်ဝန်းကျင်ရိုက်ခက်မှု့ဒဏ်ကြောင့် ခုခံအားကျဆင်းလာပြီး တစ်နေ့ထက် တစ်နေ့ ပိန်ခြုံးချိလာပါတော့တယ်။ဒီလိုနဲ့ မဖြစ်တဲ့ အဆုံးမှာ ဆေးရုံကို စတင်ပြီးတက်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ရာကနေကလေးမလေးမှာ စဖြစ်ဖြစ်ချင်း ရောဂါနုပေမဲ့ မိဘတွေရဲ့ ပေါဆမှု့ကြောင်း ရောဂါရင့်ကြပ်နေခဲ့ပါပြီ။ ဒီလိုနဲ့ ဆေးရုံတင်လိုက်တဲ့ အချိန်မှာ သအိမ်ထဲမှာ အကြိတ်ကင်ဆာဖြစ်နေပြီးဆိုတာ စစ်ဆေးချက်ထွက်လာပါတော့တယ်။ဒီလိုနဲ့ စဆေးရုံတင်လိုက်တဲ့ အချိန်မှာ ဓတ်ကင်ရတာနဲ့ ဘာနဲ့ဆိုတော့ ကလေးမလေး ခေါင်းမှာလဲ ဆံပင်တွေ က … Read more
၂၁ ရာစု မိန်းကလေးများအနေနဲ့ မဖြစ်မနေ သိထားသင့်တဲ့ ဗဟုသုတများ
၂၁ ရာစု မိန်းကလေးများအနေနဲ့ မဖြစ်မနေ သိထားသင့်တဲ့ ဗဟုသုတများ ခေတ်ကြီးက တိုးတက်တာ မြန်ဆန်နေပါတယ်နော်။ ရှေးခေတ် မိန်းကလေးတွေလို အိမ်မှာပဲ နေလို့ ရတဲ့ ခေတ်လည်း မဟုတ်တော့ပါဘူး။ မိန်းကလေးတွေရဲ့ အခန်းကဏ္ဍတွေလည်း မြင့်တက်လာလျက်ရှိနေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မိန်းကလေးတွေကတော့ ရှေးရိုးစွဲ အမြင်တွေကနေ ဖောက်ထွက်နိုင်ဖို့ ကြိုးစားနေရတုန်းပါ။ “မိန်းကလေးဆိုတာ” ကနေ အစချီပြီး မိန်းကလေးဆိုတာ ဒီလို ဖြစ်ရမယ်ဆိုပြီး လူတွေက သတ်မှတ်ထားကြပါတယ်။ တကယ်က အဲ့ထက်ပိုပြီး အရေးတကြီး သိဖို့ လိုအပ်တာတွေက ၂၁ ရာစုမှာ ရှိလို့ နေပါတယ်။ (၁) ဓမ္မတာလာခြင်းနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ အသိ မိန်းကလေးတွေကြားထဲမှာ ဓမ္မတာ လာခြင်းနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ရှေးယခင်က နိမ့်ကျတဲ့ အရာလို့ သတ်မှတ်ထားကြပါတယ်။ တကယ်က … Read more
အ႐ြယ္မတိုင္မီ ဆံပင္ျဖဴျခင္းကို ေလ်ာ့ပါးသက္သာေစမယ့္ နည္းလမ္းေကာင္း ၃ ခု…
အ႐ြယ္မတိုင္မီ ဆံပင္ျဖဴျခင္းကို ေလ်ာ့ပါးသက္သာေစမယ့္ နည္းလမ္းေကာင္း ၃ ခု (၁) ၾကက္သြန္နီ ၾကက္သြန္နီဟာ ဆံပင္ကြၽတ္ျခင္းနဲ႔ ဆံပင္ျဖဴျခင္းေတြအတြက္ အထိေရာက္ဆုံး သဘာဝပစၥည္းတမ်ိဳး ျဖစ္ပါတယ္။ ၾကက္သြန္နီကို ႀကိတ္ေခ်ထားတဲ့ ၾကက္သြန္နီအရည္ကို ေခါင္းမေလွ်ာ္ခင္ နာရီဝက္ေလာက္အလိုမွာ ဆံသားအႏွံ႔လိမ္းက်ံေပးၿပီးမွ ေခါင္းေလွ်ာ္ေပးျခင္းအားျဖင့္ ဆံပင္ျဖဴေတြ ထပ္မံတိုးပြားမလာေအာင္ ကာကြယ္ေပးႏိုင္ပါတယ္။ ၾကက္သြန္နီအနံ႔ေၾကာင့္ ေခါင္းေလွ်ာ္တဲ့အခါမွာေတာ့ စင္ၾကယ္စြာ ေလွ်ာ္ေပးဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္ (၂) အုန္းဆီနဲ႔ သံပုရာရည္ အုန္းဆီထဲကို သံပုရာရည္ အနည္းငယ္ ေရာစပ္ၿပီး ဦးေရျပားနဲ႔ ဆံသားအႏွံကို လိမ္းက်ံႏွိပ္နယ္ေပးၿပီး မိနစ္ ၃၀ ခန႔္ထားၿပီးမွ ေခါင္းေလွ်ာ္ေပးပါ။ သံပုရာရည္မွာပါဝင္တဲ့ ဗီတာမင္ဘီ၊ ဗီတာမင္စီနဲ႔ အုန္းဆီမွာ ပါဝင္တဲ့ သတၱဳဓာတ္ေတြဟာ ဆံပင္ျဖဴျခင္းျဖစ္စဥ္ကို ေလွ်ာ့ခ်ကာကြယ္ေပးႏိုင္ပါတယ္။ (၃) ႏွမ္းဆီ ႏွမ္းဆီ လက္ဖက္ရည္ဇြန္း … Read more
ဝက္လက္ၿမိဳ႕မေဈးကို မနက္တိုင္း ေဈးလာဝယ္တဲ့ ဥစၥာေစာင့္မေလး အေၾကာင္း ေအာ္သံၾကားလို႔ ၾကည့္ လိုက္တာ အေဖ့ညီမ ေဒၚေလး ျဖစ္သူ ေဒၚလုံးယဥ္ (ေခၚ) ေဒၚစပ္ ရဲ့ ေအာ္သံ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ေဒၚေလးအိမ္ကို သြားၾကည့္ လိုက္ေတာ့ အိပ္ယာထဲမွာ သတိေမ့ၿပီးေနပါတယ္။အိမ္နီးပတ္ဝန္းက်င္မွ လူႀကီးမ်ား လူငယ္မ်ားလဲ ဝိုင္းအုံလာၿပီး ယပ္ခပ္သူ ယပ္ခပ္၊ႏွိပ္ႏွယ္ေပးသူေပးႏွင့္ ဝိုင္းအုံေနပါတယ္။ ဆရာဝန္သြားေခၚဖို႔နဲ႔ ရြာဦး ဘုန္းေတာ္ႀကီးပင့္ေလ်ာက္ ဖို႔ေျပာေနၾကတာကိုလည္း ၾကားေနရပါတယ္။ မၾကာခင္ ၿမိဳ႕မွ ဆရာဝန္ႀကီးေရာက္လာၿပီး လိုအပ္တာလုပ္ေဆာင္ေပးပါတယ္။ေဒၚေလး သတိရလာပါၿပီ။ ေဒၚေလးက သူ႔အျဖစ္ကို အခုလို ေျပာျပပါတယ္။က်မ ဒီေန႔မနက္ အိပ္ယာက ထၿပီး ၿမိဳ႕ကို ေဈးဝယ္သြားပါတယ္။ေဈးဝယ္ၿပီးေတာ့ ျပန္အလာ ရြာအေနာက္ ဘက္မွာရွိတဲ့ ခ်မ္းသာႀကီး ဘုရားနားေရာက္ေတာ့ “ေရာ့ပါေအ…ညည္းကို ခ်စ္လို႔ပါေအ”ဆိုတဲ့အသံကိုၾကားလို႔ ေနာက္ … Read more
မြန်မာပြည်ကိုသိမ်းရန်တရုတ်၏ပြည်သိမ်းစီမံကိန်းဖြစ်ကြောင်းရုရှားထောက်လှမ်းရေးဖေါ်ထုပ်ကျည်တစ်ထောင့်….သေနက်တစ် ချက်မဖောက်ပဲ….ပြည်သိမ်းဖို့ကြံနေသူများ။။အမျိုးသားရေးဆိုပြီးဖင်ပြဲအောင်အော်နေတဲ့အရိုးနဲ့ထိုးမယ်အသားဖဲ့ပေးမယ်ဆိုတဲ့…ဂတုံး နဲ့ငတုံးအုပ်စုမတင်တဲ့သတင်း……မြန်မာတမျိုးသားလုံးသိဖို့။၂၀၃၀ခုနှစ်တွင်တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၌ရေရှားပါးမှုပြဿနာကို အကြီးအကျယ်ကြုံတွေ့နိုင်ပြီးသဘာဝအရင်းအမြစ်များရှာဖွေရေးဌာနမှ၂၀၀၂ခုနှစ်စာရင်းဇယားတွင်ဖော်ပြခဲ့ပါသည် ထိုပြဿနာများကိုဖြေရှင်းရန်အတွက်အိမ်နီးချင်းမြန်မာနိုင်ငံမှခေါင်းဆောင်များနှင့်တွေ့ဆုံပြီးလျှိုဝှက်စီမံကိန်းအဖြစ်မြစ်ဆုံရေကာတာစီမံကိန်းကိုရင်းနှီးမြူပ်နှံခဲ့ကြောင်းတရုတ်အစိုးရအစီရင်ခံစာတွင်ဖော်ပြထားခဲ့သည်။မြန်မာနိုင်ငံကိုပြည်သိမ်းစီမံကိန်းအဖြစ် အစားအသောက်အသုံးအဆောင်အစီးအနင်းများကိုစျေးပေါပေါဖြင့်စျေးကွက်ကိုထိုးဖောက်နေရာယူပြီးမြန်မာလူမျိုးများအကြိုက်ဆွဲ ဆောင်နိုင်ဖို့တရုတ်အစိုးရမှတရုတ်ကုန်ထုတ်လုပ်သူလုပ်ငန်းရှင်များအားPlanချမှတ်ပြီးချုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဆိုင်ကယ်ထုတ်လုပ်စက်ရုံများတွင်မြန်မာပြည်အတွက်သီးသန့်ထုတ်လုပ်သည့်စက်ရုံနှင့်တရုတ်ပြည်အတွက်သီးသန့်ထုတ်လုပ်သည့်စက်ရုံးဟုခွဲခြားထားသလိုအစားအသောက်များကိုလဲမြန်မာပြည်သူများစားသုံးရန်နှင့်တရုတ်ပြည်သူများစားသုံးရန် ဟူ၍သတ်မှတ်ခွဲခြားရောင်းချနိုင်ရန်စနစ်တကျစီမံခဲ့ကြောင်းတရုတ်ပြည်သို့ရောက်ဖူးသူတိုင်းသိရှိကြမည်ဖြစ်ပါသည်။မြန်မာပြည်သို့ တင်ပို့သောဆိုင်ကယ်များမှာလည်းကြံ့ခိုင်မှုမရှိသလိုအသက်အန္တရာယ်ကိုလဲစိတ်ချစွာမောင်းနှင်နိုင်သည့်အာမခံချက်မရှိကြပေ။ ထိုဆိုင်ကယ်များကိုတရုတ်ပြည်တွင်စီးနင်းမောင်းနှင်ခွင့်မပေးသလိုတရုတ်နိုင်ငံသားများအားရောင်းမိပါကထိရောက်စွာအရေးယူကြောင်းဥပဒေထုတ်ပြန်ထားပါသည်။စားသောက်စရာများကိုလည်းအထက်ပါအတိုင်းချုပ်ကိုင်ထားပြီးမြန်မာပြည်အတွက်သီးသန့် ဟူ၍သတ်မှတ်ထားပါသည်။အထူးသဖြင့်အကင်များ၊အသားလုံးများကြက်အူချောင်းများကိုအထူးစီမံပြီးမြန်မာနိုင်ငံအတွက်သီးသန့် စျေးပေါပေါဖြင့်လွယ်ကူစွာရောင်းချစားသုံးနိုင်ရန်အထုတ်အပိုးလှလှပပဖြင့်ဆွဲဆောင်ထားပါသည်။ တရုတ်နိုင်ငံတွင်ထိုအစားအသောက်များကိုစားသောက်ရောင်းချခွင့်လုံးဝမရှိပါ။အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ထိုအစားအသောက်တွင်Sarsapariticဟုခေါ်သောဓါတ်တစ်မျိုးပါဝင်ပြီးစာသုံးမိသူများသည်အမျိုးသားဖြစ်ပါကပန်းသေပန်းညှိုးရောဂါရရှိရုံမကဘိန်းစား များဆေးစွဲသလိုအလုပ်လုပ်ကိုင်စိတ်ပျောက်ဆုံး၍ထုံထိုင်းမှိုင်ငေးမိန့်မောစေနိုင်သလိုအမျိုးသမီးများစားသုံးပါကနို့အကြိတ်ကင်ဆာ ဖြစ်စေပြီးသားအိမ်ရှုံ့၍ကလေးမျိုးဆက်ကိုပျက်ဆီးစေနိုင်ကြောင်းကုလသမဂ္ဂW.H.Oအစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါသည်။ ကလေးသူငယ်များစားသုံးမိပါကအနာဂတ်အတွက်မျိုးဆက်ပြတ်တောက်၍လူမျိုးတုန်းရန်၁၀၀%သေချာသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံ၏လူသားအရင်းအမြစ်ကိုဘာမဟုတ်သည့်အစားအသောက်မှစနစ်တကျစီမံကိန်းရေးဆွဲထားသည်မှာမျက်လုံး/မျက်ဆံပြူးဖွယ်ရာတွေ့ရှိရပါတော့သည်။ထိုစီမံကိန်းသည်”ပြည်သိမ်းစီမံကိန်း”သာဖြစ်ကြောင်းရုရှားနိုင်ငံမှထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့ကတွေ့ရှိခဲ့ သည်ဟုရုရှားသတင်းဌာနမှလျှိဝှက်ထုတ်ပြန်ထားပါသည်။ရုရှားဟက်ကာများ၏ဖော်ထုတ်ချက်အရ၂၀၃၀ခုနှစ်တွင်မြန်မာနိုင်ငံ၏မြေပုံသည်အထက်မြန်မာပြည်တခုလုံးတရုတ်ပြည်အတွင်းသို့ရောက်ရှိနေကြောင်းရုရှားဟက်ကာများလက်သို့မြေပုံဇယားအချက်အလက်တချို့ရောက်ရှိခဲ့၍အဆိုပါသတင်းအချက်အလက်ကိုသိရှိခဲ့ရပါသည်။ ထိုကြောင့်မြန်မာပြည်သားများအနေဖြင့်တရုတ်ထုတ်စားသောက်ဖွယ်ရာများကိုအသိတရားရှိရှိဖြင့်ချင့်ချိန်သုံးစွဲစားသောက်ရန်အထူးသတိပေးလိုက်ရပါတော့သည်။ဘိန်းစစ်ပွဲကြောင့်နိုင်ငံအသိမ်းခံရသည့်သမိုင်းကိုနမူနာယူပြီးအစားအသောက်တခုကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏မြေပုံကိုပြောင်းလဲသွားအောင်မပြုလုပ်စေလိုပါကအများသိအောင်ဖြန့်ဝေပေးကြပါရန်တိုက်တွန်းလိုက်ရပါသည် Credit>>အရှင်ဇဝန(သရက်တစ်ပင်တောရကျောင်း) မြန်မာပြည်ကိုသိမ်းရန်တရုတ်၏ပြည်သိမ်းစီမံကိန်းဖြစ်ကြောင်းရုရှားထောက်လှမ်းရေးဖေါ်ထုပ်**************************************ကျည်တစ်ထောင့်….သေနက်တစ်ချက်မဖောက်ပဲ….ပြည်သိမ်းဖို့ကြံနေသူများ။။အမျိုးသားရေးဆိုပြီးဖင်ပြဲအောင်အော်နေတဲ့အရိုးနဲ့ထိုးမယ်အသားဖဲ့ပေးမယ်ဆိုတဲ့…ဂတုံးနဲ့ငတုံးအုပ်စုမတင်တဲ့သတင်း……မြန်မာတ မျိုးသားလုံးသိဖို့။၂၀၃၀ခုနှစ်တွင်တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၌ရေရှားပါးမှုပြဿနာကိုအကြီးအကျယ်ကြုံတွေ့နိုင်ပြီးသဘာဝအရင်းအမြစ်များရှာဖွေရေးဌာနမှ၂၀၀၂ခုနှစ်စာရင်းဇယားတွင်ဖော်ပြခဲ့ပါသည်။ ထိုပြဿနာများကိုဖြေရှင်းရန်အတွက်အိမ်နီးချင်းမြန်မာနိုင်ငံမှခေါင်းဆောင်များနှင့်တွေ့ဆုံပြီးလျှိုဝှက်စီမံကိန်းအဖြစ်မြစ်ဆုံရေကာတာစီမံကိန်းကိုရင်းနှီးမြူပ်နှံခဲ့ကြောင်းတရုတ်အစိုးရအစီရင်ခံစာတွင်ဖော်ပြထားခဲ့သည်။မြန်မာနိုင်ငံကိုပြည်သိမ်းစီမံကိန်းအဖြစ် အစားအသောက်အသုံးအဆောင်အစီးအနင်းများကိုစျေးပေါပေါဖြင့်စျေးကွက်ကိုထိုးဖောက်နေရာယူပြီးမြန်မာလူမျိုးများအကြိုက်ဆွဲဆောင်နိုင်ဖို့တရုတ်အစိုးရမှတရုတ်ကုန်ထုတ်လုပ်သူလုပ်ငန်းရှင်များအားPlanချမှတ်ပြီးချုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဆိုင်ကယ်ထုတ်လုပ်စက်ရုံများတွင်မြန်မာပြည်အတွက်သီးသန့်ထုတ်လုပ်သည့်စက်ရုံနှင့်တရုတ်ပြည်အတွက်သီးသန့်ထုတ်လုပ်သည့်စက်ရုံးဟုခွဲခြားထားသလိုအစားအသောက်များကိုလဲမြန်မာပြည်သူများစားသုံးရန်နှင့်တရုတ်ပြည်သူများစားသုံးရန် ဟူ၍သတ်မှတ်ခွဲခြားရောင်းချနိုင်ရန်စနစ်တကျစီမံခဲ့ကြောင်းတရုတ်ပြည်သို့ရောက်ဖူးသူတိုင်းသိရှိကြမည်ဖြစ်ပါသည်။မြန်မာပြည်သို့တင်ပို့သောဆိုင်ကယ်များမှာလည်းကြံ့ခိုင်မှုမရှိသလိုအသက်အန္တရာယ်ကိုလဲစိတ်ချစွာမောင်းနှင်နိုင်သည့်အာမခံချက်မရှိကြပေ။ ထိုဆိုင်ကယ်များကိုတရုတ်ပြည်တွင်စီးနင်းမောင်းနှင်ခွင့်မပေးသလိုတရုတ်နိုင်ငံသားများအားရောင်းမိပါကထိရောက်စွာအရေးယူကြောင်းဥပဒေထုတ်ပြန်ထားပါသည်။စားသောက်စရာများကိုလည်းအထက်ပါအတိုင်းချုပ်ကိုင်ထားပြီးမြန်မာပြည်အတွက်သီးသန့် ဟူ၍သတ်မှတ်ထားပါသည်။အထူးသဖြင့်အကင်များ၊အသားလုံးများကြက်အူချောင်းများကိုအထူးစီမံပြီးမြန်မာနိုင်ငံအတွက်သီးသန့်စျေးပေါပေါဖြင့်လွယ်ကူစွာရောင်းချစားသုံးနိုင်ရန်အထုတ်အပိုးလှလှပပဖြင့်ဆွဲဆောင်ထားပါသည်။ တရုတ်နိုင်ငံတွင်ထိုအစားအသောက်များကိုစားသောက်ရောင်းချခွင့်လုံးဝမရှိပါ။အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ထိုအစားအသောက်တွင်Sarsapariticဟုခေါ်သောဓါတ်တစ်မျိုးပါဝင်ပြီးစာသုံးမိသူများသည်အမျိုးသားဖြစ်ပါကပန်းသေပန်းညှိုးရောဂါရရှိရုံမကဘိန်းစား များဆေးစွဲသလိုအလုပ်လုပ်ကိုင်စိတ်ပျောက်ဆုံး၍ထုံထိုင်းမှိုင်ငေးမိန့်မောစေနိုင်သလိုအမျိုးသမီးများစားသုံးပါကနို့အကြိတ်ကင်ဆာဖြစ်စေပြီးသားအိမ်ရှုံ့၍ကလေးမျိုးဆက်ကိုပျက်ဆီးစေနိုင်ကြောင်းကုလသမဂ္ဂW.H.Oအစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါသည်။ ကလေးသူငယ်များစားသုံးမိပါကအနာဂတ်အတွက်မျိုးဆက်ပြတ်တောက်၍လူမျိုးတုန်းရန်၁၀၀%သေချာသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံ၏လူသားအရင်းအမြစ်ကိုဘာမဟုတ်သည့်အစားအသောက်မှစနစ်တကျစီမံကိန်းရေးဆွဲထားသည်မှာမျက်လုံး/မျက်ဆံပြူးဖွယ်ရာတွေ့ရှိရပါတော့သည်။ထိုစီမံကိန်းသည်”ပြည်သိမ်းစီမံကိန်း”သာဖြစ်ကြောင်းရုရှားနိုင်ငံမှထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့ကတွေ့ရှိခဲ့ သည်ဟုရုရှားသတင်းဌာနမှလျှိဝှက်ထုတ်ပြန်ထားပါသည်။ရုရှားဟက်ကာများ၏ဖော်ထုတ်ချက်အရ၂၀၃၀ခုနှစ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံ၏မြေပုံသည်အထက်မြန်မာပြည်တခုလုံးတရုတ်ပြည်အတွင်းသို့ရောက်ရှိနေကြောင်းရုရှားဟက်ကာများလက်သို့မြေပုံ ဇယားအချက်အလက်တချို့ရောက်ရှိခဲ့၍အဆိုပါသတင်းအချက်အလက်ကိုသိရှိခဲ့ရပါသည် ထိုကြောင့်မြန်မာပြည်သားများအနေဖြင့်တရုတ်ထုတ်စားသောက်ဖွယ်ရာများကိုအသိတရားရှိရှိဖြင့်ချင့်ချိန်သုံးစွဲစားသောက်ရန်အထူးသတိပေးလိုက်ရပါတော့သည်။ဘိန်းစစ်ပွဲကြောင့်နိုင်ငံအသိမ်းခံရသည့်သမိုင်းကိုနမူနာယူပြီးအစားအသောက်တခုကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏မြေပုံကိုပြောင်းလဲသွားအောင်မပြုလုပ်စေလိုပါကအများသိအောင်ဖြန့်ဝေပေးကြပါရန်တိုက်တွန်းလိုက်ရပါသည် Credit>>အရှင်ဇဝန(သရက်တစ်ပင်တောရကျောင်း)
မရိုးသားဘဲနဲ့ချစ်တာက တကယ်ချစ်တာမဟုတ်ပါ မရိုးသားတာတွေပေါ်သွားတဲ့တစ်နေ့မှာ အဲဒီ အချစ်တွေပျောက်ဆုံးသွားလိမ့်မယ်
လိုအပ်ချက်လေးတွေ ချစ်တဲ့အခါ.. ရိုးသားဖို့လိုတယ် တကယ်ချစ်ရင် ရိုးသားဖို့လိုပါတယ် မရိုးသားဘဲနဲ့ချစ်တာက တကယ်ချစ်တာမဟုတ်ပါ မရိုးသားတာတွေပေါ်သွားတဲ့တစ်နေ့မှာ အဲဒီ အချစ်တွေပျောက်ဆုံးသွားလိမ့်မယ် အငြင်းပွားတဲ့အခါ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးဖို့လိုတယ် အငြင်းပွားပြီး ပြီးလိုက်ရင် အမုန်းတရားတွေ ပဲကျန်နေခဲ့လိမ့်မယ်… ဒီတော့ငြင်းပါ စိတ်တိုင်းကျငြင်းကြပါ အဲ ပြီးရင်တော့ အကုန်ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပြီး အဖြေရှာရမှာပေါ့…. ဒေါသထွက်တဲ့အခါ အေးအေးဆေးဆေး အနားယူဖို့ လိုတယ် ဒေါသထွက်တဲ့ အခါပူလောင်နေတယ်။ ဒီအပူတွေက အဲဒီ ဒေါသနဲ့ မဆိုင်တဲ့ အခြားလူတွေကိုပါ ကူးစက်စေတယ်။ ဒါကြောင့် အေးဆေးအနားယူဖို့လိုတယ်။ ပျော်ရွှင်တဲ့အခါ မျှဝေဖို့ လိုတယ် တစ်ယောက်ထဲပျော်ရွှင်တာထက် အများကြီး ပျော်ရွှင်ရတာက ပိုပျော်ဖို့ကောင်းတယ်။ပျော်ရွှင်စရာတွေ ဖြစ်လာရင်မိသားစု လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အတူတူပျော်ပါ။ အပြင်တင်ချင်တဲ့အခါ ခွင့်လွတ်တတ်ဖို့ လိုတယ့်…. အပြစ်တင်ပြီး ခွင့်မလွတ်တတ်ရင် အစိုင်အခဲ တစ်ခုကို ဆုပ်ကိုင်ထားတာနဲ့တူတယ်။ … Read more
လွယ်လွယ်ရရင် . . .လူတွေက တန်ဖိုးထားရကောင်းမှန်း နားမလည်ကြတော့ဘူး
လွယ်လွယ်ရရင် . . .လူတွေက တန်ဖိုးထားရကောင်းမှန်း နားမလည်ကြတော့ဘူး အဲ့ဒီအထဲမှာ အချစ်နဲ့ စေတနာတွေ ထိပ်ဆုံးက ပါတယ် ။ ကိုယ်က လိုမယ်ထင်လို့ပေးလိုက်ပေမယ့် တစ်ဖက်က ပေါနေလို့ပေးတယ်လို့လွယ်လွယ်လေး သဘောထားလိုက်ကြတာလေ..၊ တန်ဖိုးရှိပါလား တန်ဖိုးထားရမှာပါလို့ မတွေးမိတော့ဘူး ဒါပေမယ့် …ဝမ်းမနည်းပါနဲ့ ကိုယ့်မေတ္တာတွေ စစ်မှန်ရင် တစ်နေ့ကျရင်ရောင်ပြန်လာမှာပါ..။ ရောင်ပြန်လာမယ်ဆိုတာ ကိုယ်ပေးလိုက်တဲ့လူဆီကနေ ပြန်ပြီး တန်ပြန်လာလိမ့်မယ်လို့တော့ တစ်ထစ်ချကြီး မတွေးစေချင်ဘူး သေချာပေါက် တန်ပြန်လာပါလိမ့်မယ် ကိုယ်ပေးလိုက်တဲ့လူဆီက ဖြစ်ချင်မှ ဖြစ်မှာပေါ့..၊ လူတွေကို တစ်ခုတော့ သိစေချင်တယ် အကူအညီပေးလိုက်တယ်ဆိုတိုင်း အရမ်းကို အဆင်ပြေနေလို့မဟုတ်ပဲ တစ်ခါတစ်လေကိုယ်ကိုယ်တိုင် ဒုက္ခဖြစ်ခံပြီး ကူညီပေးလိုက်တာတွေမှ အများကြီးပါ..။ ကိုယ်က သူအဆင်ပြေပါစေတော့ဆိုပြီး ကူညီလိုက်ပေမယ့် နောက်ဆုံး တကယ်အဆင်မပြေဖြစ်သွားတာက ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့စကား သိပ်ကိုမှန်ပါတယ် အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့ ဘဝမှာ … Read more
သိန်းသောင်းချီပိုင်ဆိုင်နိုင်တဲ့ လက္ခဏာ ဆိုတာ
သိန္းေသာင္းခ်ီပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ေသာ တနဂၤေႏြၿဂိဳလ္ခုံေပၚက ငါး႐ုပ္ ကြၽႏု္ပ္သည္ လကၡဏာပညာကို အသက္ ၁၃ ႏွစ္ထဲက ေလ့လာလိုက္စားခဲ့သည္။ သင္ယူခဲ့ေသာ ပညာရပ္မ်ားကိုလဲ အျပင္တြင္ လက္ေတြ႕က်က်ေလ့လာသုံးသပ္ၿပီးမွ လကၡဏာဆရာေလာကသို႔ဝင္လာခဲ့တာပါ။ လကၡဏာပညာဟာ လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ဘဝကို ၇၅% ေလာက္မီးေမာင္းထိုးျပထားသလိုပါပဲ။ ဒီလေတာ့လက္ဝါးျပင္ တနဂၤေႏြၿဂိဳလ္ခုံမွာရွိတဲ့ ငါး႐ုပ္နဲ႔ပတ္ သက္၍တင္ျပေပးသြားမယ္။ လက္ဝါးျပင္ရဲ႕ လက္သူႂကြယ္ေအာက္ မွာ ေအာင္ျမင္ေရးလမ္းေၾကာင္းနဲ႔ မွား တတ္တဲ့ ငါး႐ုပ္သေကၤတတခုပါတတ္တယ္။ ေသခ်ာၾကည့္ရင္ေတာ့ကြဲပါတယ္။ ေအာင္ျမင္ေရးလမ္းေၾကာင္းက ေျဖာင့္မတ္တယ္။ ငါး႐ုပ္ကေတာ့အခြၽန္ အတက္ေလးေတြပါတယ္။ ငါး႐ုပ္ သေကၤတကေတာ့ လက္ဝါးမွာထင္ရွားရင္ ထင္ရွားသလို ေအာင္ျမင္ေရးလမ္း ေၾကာင္းထက္ပိုေကာင္းတတ္တယ္။ လကၡဏာၾကည့္ပရိသတ္ရဲ႕လက္ဝါးမွာ ငါး႐ုပ္သေကၤတပါလာၿပီဆိုရင္ လကၡဏာပိုင္ရွင္ဟာ ႐ုတ္တရတ္ခ်မ္းသာတဲ့ဘဝကို ေျပာင္းလဲသြားတဲ့အထိ ငါး႐ုပ္က ေပးစြမ္းႏိုင္ပါတယ္။ တနဂၤေႏြ ၿဂိဳလ္ခုံမွာပါလာခဲ့ရင္ ေအာင္ျမင္ေရး သေကၤတလိုပဲအက်ိဳးေပးမယ္။ ထူးျခားသြားတာက အေမြေတြ ထီေတြ ႐ုတ္တရတ္ရတာေပါက္တာထက္ … Read more
ပထမဆုံးအနမ်းဟာ ချစ်သူဘဝမှာ အလွန်အရေးကြီးတဲ့ အခန်းကဏ္ဍက ပါဝင်ပါတယ်။ ဘဝတစ်ခုလုံးစာ အမှတ်တရ ဖြစ်တဲ့အတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်သွားဖို့ သင့်တဲ့ ကိစ္စရပ်တစ်ခုပါ။ ဒီတော့ Shwemom ပရိသတ်ကြီးအနေနဲ့ ချစ်သူ ကောင်လေးကို ပထမဆုံးအနမ်းပေး မယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ကူးရှိရင် အောက်ဖော်ပြချက်လေးတွေကို ဖတ်ထားသင့်ပါတယ်။ (၁) ခံတွင်းအနံ့ သန့်ရှင်းပါစေ အရေးကြီးဆုံးအချက်ကတော့ ခံတွင်းအနံ့ ဆိုးဆိုးဝါးဝါး မဖြစ်ဖို့ လိုပါတယ်။ လူတိုင်းနီးပါးမှာ ခံတွင်းအနံ့ဆိုးဝါးကြပါတယ်။ သာမန်အချိန်ဆို မိမိဘာသာ မသိသာပေမယ့်၊ တစ်စုံတစ်ယောက်နဲ့ စကားပြောတဲ့အခါ အတော်လေး ဆိုးဝါးပါ တယ်။ အထူးသဖြင့် ချစ်သူနဲ့ နမ်းချိန်မှာ ခံတွင်းအနံ့ သန့်ရှင်းနေဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီတော့ သွားတိုက်ပါ၊ ယင်းနောက် ခံတွင်းအနံ့ပျောက်ဆေး ငုံပါ၊ ယင်းနောက် ပူရှိန်းပီကေကဲ့သို့ အနံ့လုံစေတဲ့အရာတစ်ခုခုကို ငုံသွားပါ။ (၂) … Read more